मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज: को-को हुँदैछन् मन्त्री ? – Online National Network
मन्त्रिपरिषद् विस्तार आज: को-को हुँदैछन् मन्त्री ?
१० श्रावण २०७४, मंगलवार ०३:००
काठमाडौं, १० साउन – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार नसकिएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको भन्दै आज (मंगलबार) गर्ने जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार दाहाललाई फोन गरी मंगलबार(आज) मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने जनाएका हुन् । आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा देउवाले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वचन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सोमबार नसकिएका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै मंगलबार (आज) गर्ने जनाएका छन्। देउवाले सोमबार दाहाललाई फोन गरी मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने जानकारी गराएका थिए।
दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिलाइ भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। पार्टी बैठकमै सरकार सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भएको थियो।
पौडेल पक्षबाट बलबहादुर केसी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी, सरिता प्रसाईं, कमला पन्तलगायतको नाम चर्चामा छ। यसअघि मन्त्री र राज्यमन्त्री भइसकेकालाई दोहोर्‍याउन नहुने दबाब पौडेल पक्षमा छ। सिटौला पक्षबाट भीमसेनदास प्रधान र खड्का पक्षबाट मोहनबहादुर बस्नेतलाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी छ।
फोरम लोकतान्त्रिकले भने यसअघि नै मन्त्री भएका जितेन्द्र देव र गोपाल दहितलाई पठाउने भएको छ। कांग्रेसबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ६ र लोकतान्त्रिक फोरमबाट २ समेत गरी म‌ंगलबार १८ मन्त्री थप गर्ने तयारी देउवाले गरेका छन्।